Famantarana 6 no atrehinareo amin'ny mpahay rongony antonony (fa mpiziriziry ihany) - Mpanararaotra
Tsy ny mpifoka rongony rehetra no foronina mitovy. Raha mety kokoa ny mandoko azy rehetra amin'ny borosy iray ihany, ity aretin-toetra sarotra ity dia azo faritana ho spektrum mihoatra ny karazany tokana, raikitra ary tsy miovaova.
Miteraka ny olana amin'ny fomba hamantarana sy hamaly izany fanararaotana narcissistic izay mety hafangaro amin'ny fifankatiavana mahazatra anao (sy azo ekena kokoa amin'ny fiaraha-monina).
Ity endrika narcissism antonony ity dia matetika tsy dia fantatra loatra ary tsy dia mora tohina, ary raha ny fahavoazana ara-psikolojika ho an'ilay niharam-boina MEY aza dia henjana kokoa, na eo aza izany.
Ka ahoana no ahitanao ny mahadomelina antonony? Ahoana no tsy itovizany amin'ireo mpihinan-doha hafa sy ny olona mahazatra anao izay tsy mijaly amin'ity aretina ity?
rehefa raiki-pitia amin'ny lehilahy manambady ianao
Tsy fahampiana fiaraha-miory Vs Tsy firaharahana tanteraka ny fahatsapana
Ny fahatsapana izay avy ivelany amin'ny narcissist (izany hoe ny an'ny olon-kafa) dia heverina ho zavatra vahiny tanteraka. Ny vahiny toy ny fiteny hafa ankoatry ny tenin-drazany - zavatra saika tsy takatra amin'ny heviny fa tsy azo ialana sy tsy misy fiainana.
Izany dia satria ny mpifoka rongony rehetra dia tsy manana fangorahana hiditra amin'ny kiraron'ny hafa ary hahafantatra ny eritreritra sy ny fihetsem-po mety hananan'izy ireo. Misy ihany anefa ny fomba samihafa hanatonana ireo vatan'olon-kafa ireo.
Amin'ny faran'ny farany faran'izay mafy dia tsy raharahiany tanteraka ny fihetseham-pon'ny hafa, ary hino azy ireo ho tsy misy dikany izy ireo ary tsy misy vokany amin'ny fihetsiny na ny vokatra irina. Ny mpampihomehy antonony kokoa kosa dia hahatakatra fa misy ny fihetsem-po toy izany ary mety hampifanaraka ny fihetsiny amin'ny sasany izy ireo KELY diplaoma, saingy tsy ho azon'izy ireo ny loharano na ny dikan'io fihetsika io.
Rehefa izy ireo ihany no loharano, dia tsy ho hitany ny anjara asany, koa na maratra ianao, tezitra, misavoritaka na matahotra ianao dia hitazona ny tsy fananany tsiny amin'ny fotoana rehetra. Tranga iray amin'ny 'fahatsapanao, ny olanao.'
Ny valintenin'izy ireo dia mety ho toy ny mangatsiaka na lavitra. Ny fihetsik'izy ireo dia manaraka ny lalan'ny tsy fandriam-pahalemana kokoa noho ny mampijaly ivelany.
Tandremo ny lolompo mandrakizay
Rehefa maratra isika, dia saika tsy azo ihodivirana ny fananantsika fahatsapana lolom-po, saingy mihena ny fotoana rehefa mamela heloka isika, ary amin'ny lafiny iray, manadino.
Ilay mpitsabo mpanelanelana amin'ny antonony kosa dia hitondra lolompo mandritra ny fotoana tsy voafetra - ary ho fantatrao izany ny zazalahy. Rehefa ao anatin'ny iray amin'ny toe-tsainy izy ireo dia miomàna ho azy ireo hampiakatra ny indiscretions lasa amin'ny enta-mavesatra. Ny zavatra kely rehetra nataonao tsy nety tamin'izy ireo dia hokarohina sy alefa toy ny balafomanga bitika kely, natao hamelezana fihetseham-po eo amin'ny faritra mitokona ao am-ponao sy ao an-tsainao.
Ampiasain'izy ireo ho toy ny rafitra fiarovana hiarovan-tena amin'ireo mpitsikera azy ireo ity tetika ity ary hampitodika anao indray ny saiko na dia sahy niatrika ny tsy fahalalany aza ianao. Na dia ny mpifoka rongony antonony aza mora zahana fifandimbiasam-bola , Azo inoana fa handray ady hevitra izy ireo fa tsy amin'ny fomba mahery setra loatra.
Ny aosin'izy ireo dia tsy hamela azy ireo hamela heloka sy hanadino toy ny olon-dehibe matotra ara-pihetseham-po, noho ny fiheverany ny lolompo kely rehetra ho toy ny fomba famotsorana azy ireo amin'ny asa ratsy rehetra any aoriana (ohatra: 'tsy afaka tezitra amiko ianao noho ny X, nanao an'i Y sy Z ianao taloha - mpihatsaravelatsihy ianao ”).
Halan'izy ireo ny ho very
Narcissists dia zavaboary tena mifaninana ary hino matetika fa lehibe amin'ny zavatra maro izy ireo. Izy ireo dia mpanao fanatanjahan-tena kokoa noho ianao, mamorona kokoa, mifampiresaka momba ny raharahan'izao tontolo izao… heck, na dia eo an-dakozia aza, ny sakafon'izy ireo no manome ny tsara indrindra azonao.
Ihany, tsy afaka ny ho alika ambony foana amin'ny zavatra rehetra izy ireo. Arakaraka ny maha-lehibe ny haben'ny narcissism no vao mainka ho sarotra ho azy ireo hanaiky izany. Ilay mpandala ny antonony dia mazàna manana realisme kely farafaharatsiny ao an-tsain'izy ireo hampiasaina indraindray, ary ampiasain'izy ireo amin'ny paikady izany hametrahana ny tenany ho tsara indrindra ao anatin'ny masontsivana sasany.
Izy ireo angamba no tsara bika indrindra ho an'ny taonany, ny mpilalao hockey tsara indrindra ao amin'ny ekipan'izy ireo, olona mahay indrindra sendra nahita izy ireo , na manana trano lehibe indrindra eo amin'ny namany rehetra. Oh, ary tsara kokoa noho ianao izy ireo (ny mpiara-miasa / mpiara-miasa / namana / mpianakavy) amin'ny fomba rehetra eritreretinao.
Raha angatahina mba hanome isa ny tenany manohitra ny toetra mampiavaka azy ireo dia tsy hidina ambanin'ny 8 mihitsy izy ireo - ampitahao amin'ny narcissist sasany izay manana ny maha izy azy tanteraka delestazy amin'ny fahalehibiazana Midika izy ireo fa mandà tsy hiala amin'ny 10 na inona na inona isa omena. Ireo tsy mpampihomehy dia hanaiky fa tsara amin'ny lafiny sasany, fa raha ny tena izy dia somary antonony amin'ny hafa.
Ary raha tokony handresy narcissist antonony ianao amin'ny lalao iray na amin'ny fifaninanana dia azonao antoka fa ho vonona amin'ny fialan-tsiny izy ireo amin'ny fomba nanaovanao azy io (nisy nanafika ny lalao, namitaka ianao, variana izy ireo, tsy azon'izy ireo atao. tsy salama). Holazan'izy ireo fotsiny ny zavatra rehetra hametraka anao ary hitazona anao amin'ny zavatra hitany fa toerana sahaza anao.
Famakiana tena ilaina momba ny famonoana (mitohy etsy ambany ny lahatsoratra):
Fanimbana olona: mekanisma ho an'ireo mpifoka rongony sy fiaraha-miasa amin'ny mpiara-belona
Ahoana ny fahaizanao manontany azy ireo?
Na inona na inona lazain'ny mpampihomehy, dia ny marina. Na izany aza dia manao zavatra izy ireo, azo hamarinina. Farafaharatsiny, izany no fahitan'izy ireo azy.
Toy izany koa fa tsy tian'ilay mpifoka rongony ny ho resy dia tsy zakan'izy ireo rehefa misy miteny ny olona manohitra ny azy. Hifamaly izy ireo mandra-pahatongan'izy ireo manga amin'ny tarehy hanamafisany ny fahitany ny hafa rehetra.
Ankehitriny, ny Joe mahazatra anao dia ho afaka hihaino ireo hevitra nomen'ny hafa sy hanaja azy ireo, na dia tsy mifanaraka amin'izy ireo aza izy ireo. Mety ho voafitaky ny fanaporofoan-kevitr'olona mihitsy aza izy ireo raha toa ka ampy ny antony.
maninona aho no mahatsiaro moana
Mpampiasa zava-mahadomelina maro no hamaly amin'ny alàlan'ny fanafihana manohitra ny 'mpifanandrina aminy' hamaky ny maha-ara-dalàna ny fifamaliana. Hanao fanaratsiana manokana izy ireo ary hametra-panontaniana amin'ny antsipiriany kely rehetra hanerena ilay olona hiverina amin'ny tongony aoriana. Mety hampiasa fiteny mahery setra sy fihetsika koa izy ireo hanamafisana ny fanjakany amin'izay mitady hitady fanamby amin'ny fanjakany.
Amin'ny ambaratonga antonony kokoa dia tsy raharahain'ireo mpampihomehy iray izay fanambarana izay mifanohitra amin'ny hevitr'izy ireo amin'ny maha drivel azy tanteraka. Tsy dia manafika izy ireo ary mihodina bebe kokoa, mitady tsy hiraharaha fa tsy hirotsaka. Amin'izany fomba izany dia afaka manohy milaza ny fomba fijeriny izy ireo ary manao zavatra araka izay hitany fa mety nefa tsy tena miresaka ny olan'ny sasany. Antsoy hoe loha-kisoa, ataovy hoe maditra, antsoy hoe inona no itiavanao ny olana dia tsy avela hanana fomba fijery tsy mifanaraka amin'ny azy ireo ianao.
Miahiahy sisin-tany any Paranoia
Ny narcissists dia tsy fanahy mahatoky. Heverin'izy ireo ny ankamaroan'ny olona amin'ny alàlan'ny maso mampiahiahy toy ny hoe miambina hatrany amin'ny teny na fihetsika mety hanohitra ny fahamboniany.
Rehefa tsy zakan'ny tanana ity dia mety hiafara amin'ny fihazonan'ny paranoia tototra tanteraka izy ireo, mino ny hafa fa manao zavatra hanafika na hanimba azy ireo - na dia tsy misy hetsika toa izany aza. Mieritrereta manaraka ny fitsipiky ny finoana ny mpiara-miasa dia miray tsikombakomba mba hahazoana azy ireo ny sakaosy na ny mpivady manao raharaha tsy ara-dalàna ao ambadiky ny lamosin'izy ireo.
Matetika dia matetika io paranoia io dia miseho ho fomba fifehezana ny fiainana. Mikatsaka ny hanjakazaka amin'ny resaka izy ireo mba hisorohana ny mety (ao an-tsainy) amin'ny fanafihana am-bava. Raha efa misy ny dinika ataon'ny sasany dia handehandeha izy ireo ary hanelingelina mba hahalalany izay lazainy (raha sanatria misy zavatra ratsy momba azy ireo). Tian'izy ireo ny any amin'ny fivoriana asa rehetra na farafaharatsiny mba hahazo ny ambany ambany amin'ny zavatra voalaza taorian'izay.
Izy ireo dia hitazona ny sakaizany akaiky amin'ny fotoana rehetra azo antoka mba hahazoana antoka fa tsy manam-pahatokisana izy ireo. Azon'izy ireo atao ny miantso azy ireo isaky ny 30 minitra hanamarinana hoe aiza izy ireo, inona no ataony ary iza no miaraka aminy. Mety hampiasa rindrambaiko amin'ny telefaona findainy na finday ao anaty fiarany mihitsy aza izy ireo hanarahana ny hetsika rehetra ataon'izy ireo.
Ny tsy mpihinana zava-mahadomelina koa dia manana ny tsy fahatokisan-tena ary ireo, ohatra, dia mety hiteraka eritreritra famadihana na tsy fahombiazana, saingy vetivety izy ireo. Arakaraky ny halaviran'ny spectrum narcissistic no halehanao no mahasalama sy mifehy ny olona iray. Amin'ny ambaratonga antonony dia mety antenainao ny sasany amin'ireo voalaza etsy ambony, amin'ny fotoana sasany.
Maivana kokoa amin'ny 'gazy'
Ilay andian-teny hoe gaslighting dia efa nofaritanay sy nofariparitanay tamin'ny lahatsoratra iray hafa, ary, raha fintinina, dia miresaka momba ny fizotrany ampiasain'ny mpifoka rongony hanakorontanana sy hampisavorovoroana ny olona iharan'izy ireo amin'ny fanaovana azy ireo hanontany ny eritreriny sy ny fahatsiarovany azy manokana.
Ity teknika ity dia mety hanimba amin'ny fomba feno habibiana, nefa mandaitra amin'ny famoritana ilay olon-kafa araka izay tiany. Olona manana mararindry antonony no hampiasa fandrehitra , saingy mety hanao izany amin'ny ambaratonga kely kokoa na amin'ny fotoana mitokana izy ireo fa tsy hanimba tanteraka ny fatokisanao tena.
Hanova ny lohahevitra izy ireo hialana amin'ny fitsikerana, hanitrikitrika fa ny fahatsiarovan'izy ireo ny hetsika iray no marina, ary hamoaka anao ny fahatsapany ny fialonana sy ny tsy fahatokisan-tena aminao. Hevero ho gaslighting-lite io: mbola manipulative ihany, fa tsy dia matetika loatra ary ampiasaina bebe kokoa hampisondrotra ny ego azy manokana fa tsy hanambany ny anao.
Ny narsisma dia, araka ny efa noresahintsika, momba ny aretina iray izay mety tsy mitovy amin'ny fahasarotana. ny teknika fanodinkodinana ampiasain'ny narcissists antonony dia manara-penitra, saingy tsy mitovy amin'ny hafanany sy ny hafanam-pony. Ireo famantarana voalaza etsy ambony dia mety hanampy amin'ny fitadiavana ireo izay manana endrika mahaliana kokoa - ireo izay mihoatra ny hoe kely fotsiny, fa tsy dia mahery noho ny endri-tsaina psychopathic any amin'ny faran'ny spectrum.
Ilaina anefa ny mahatadidy fa ny fanararaotana dia fanararaotana ihany, na dia tsy dia miharihary toa izany aza. Ny toetra mifehy sy manipulative an'ireo olona ireo dia midika fa hanakorontana ny toetranao voajanahary izy ireo na inona na inona ny antonony - amin'ny ambaratonga hafa na hafa, dia ho very ny ampahany amin'ny maha-ianao anao raha mbola voafandriky ny iray lava loatra ianao.
Efa nifanena tamina olona mifanaraka amin'ny volavolan-dalàna ve ianao amin'ny maha-mpahay rongony antonony kokoa? Iza amin'ireo famantarana ireo no fanomezana lehibe indrindra amin'ny zavatra niainanao? Mametraha hevitra etsy ambany hizara ny eritreritrao sy ny zavatra niainanao tamin'ny hafa.
ny fomba hanehoana fankasitrahana ny lehilahyo
maso lava amin'ny bandy iray
lalao wwe azonao atao
manampy olona tafasaraka amin'ny fisarahana